'कामदारका क्षति भएका घर बनाइदिन्छौं' - Nepal News - Latest News from Nepal
‘कामदारका क्षति भएका घर बनाइदिन्छौं’
नेपाली युवा धेरै काम गर्न जाने प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्येको एक संयुक्त अरब इमिरेट्सको (युएई) आबुधाबिस्थित नेसनल क्याटरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारेक एल गुयनी नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कारमदारका परिवार भेट्न नेपाल आए। विशेषत: खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित भएता पनि सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, मानव संशाधन तथा परामर्शसेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको समूह नेसनल क्याटरिङ कम्पनीमा (एनसीसी) भारतीय पछि सबैभन्दा धेरै संख्यामा नेपाली काम गर्छन्।
गुयनीसँग उनको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य, नेशनल क्याटरिङ कम्पनीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था, नेपाली कामदारको बारेमा उनको कम्पनीको मूल्यांकन र यस विपद्को घडीमा उनको कम्पनीले नेपाली कामदार तथा उनीहरूका रिवारका लागि गर्न चाहेको सहयोगको बारेमा अन्नपूर्णका लागि कुबेर चालिसेले गरेको वार्ता :
तपाईंको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो?
हाम्रो कम्पनीमा करिब ६ हजार कामदार छन्। त्यसमध्ये भारतीयपछि सबैभन्दा धेरै संख्यामा नेपाली काम गर्छन्। नेपालमा भएको विपद्पछि हाम्रो कम्पनीमा कार्यरत करिब एक हजार तीन सय नेपालीको परिवार तथा उनीहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन हामी नेपाल आएका हौं।
हाम्रा कामदारको परिवारको सही अवस्था तथा उनीहरूलाई चाहिने मद्दतको बारेमा छलफल गर्न हामी नेपाल आएका हौं। नेपालमा महाभूकम्प गएको खबर पाएपछि हाम्रा कम्पनीका सबै कामदारले आफ्ना नेपाली साथीका लागि आर्थिक सहायता संकलन गरे।
त्यसमा हाम्रो समूहका कम्पनीले पनि थप गरे। जब राम्रै रकम जम्मा भयो आफना कामदारको परिवारलाई भेट्न तथा उनीहरूलाई सहयोग गर्न हामी आफै नै नेपाल आयौं। हामीले नेपाल आउनु अघि आफ्ना कामदारका घर तथा परिवारको अवस्था बारेमा सूचना संकलन गर्‍यौं।
हाम्रो कम्पनीमा कार्यरतमध्ये करिब तीन सयदेखि चार सयसम्मका परिवारको घरक्षति भएको सूचना संकलन गरेर हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौ भन्ने बुझ्न आएका हौं। हामी विपद्बाट प्रभावित कामदारका परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको आवश्यकताको बारेमा सूचना संकलन गर्छौ।
तपाईंको कम्पनीले महाभूकम्पबाट प्रत्येक्ष प्रभावित कामदारका परिवारलाई कसरी सहयोग गर्दछ?
पहिलो चरणमा हामीले लुगाफाटा तथा केही रकम आफ्नै आएर प्रभावित परिवारलाई दियौं। यसछि पनि तुरुन्तै हामी खानेकुरा तथा लुगाफाटा पठाउँछौं। दोस्रो चरणमा हामी हाम्रा इन्जिनियरलाई पठाउनेछौं।
हाम्रो आफनै इन्जिनियर विभागका इन्जिनियर नेपाल आएर हाम्रा कामदारको सामान्य क्षति भएका भवनको मर्मत संभार गर्नेछन्। त्यसपछि तेस्रो चरणमा हाम्रा कामदारको पुर्णरुपमा क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणको लागी उनीहरूले काम गर्दछन् र घर बनाइदिन्छन्।
हामी आफ्ना कामदारको पूर्णक्षति भएको घर बनाइदिन्छौं। हाल हामी प्रथम चरणमा छौं। हामीले संकलन गरेर ल्याएका लुगाफाटा वितरण गर्दैछौं। हामी यसैक्रममा हाम्रा कामदारको पूर्णक्षतिको विवरण पनि संकलन गर्दै छौं।
हामीले अति प्रभावित कामदारलाई घरविदा दिएर घर पनि पठायौं। जसको घर तथा भौतिक सम्पत्तिको धेरै क्षति भएको थियो, उनीहरूलाई तुरुन्तै घरबिदामा पठायौं। यस्तो संवेदनशिल क्षणमा मानवीयता पहिलो कुरा हो।
यसैले हामी यति रुपैयाँको सहयोग गर्दछौं भन्दा पनि जिम्मेवारीका साथ आफ्ना कामदारलाई सहयोग गरिरहने छौं। हामीहरू हाम्रा कामदारलाई आफनो परिवार जस्तै मान्ने भएकोले उनीहरूसँग समानताको व्यवहार गर्दछौं।
पछिल्ला वर्ष आप्रवासी कामदार विशेषत: नेपाली कामदारमाथिको श्रम शोषण तथा अमानवीय व्यवहारको चर्चा बढी भएको पाइन्छ। अबुधाबिमा आप्रवासी कामदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ?
आबुधाबी सरकारले हाल प्रत्येक कम्पनीमा मानव अधिकार तथा मानव संशाधन विभाग खोल्नैपर्ने कानुन बनाएको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो कम्पनी युएईमा आफ्नो कम्पनीमा मानव अधिकार विभाग गठन गर्ने पहिलो कम्पनी हो।
यसका कारण पनि हाम्रो कम्पनीमा कामदारसँग राम्रो व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर पनि दिइन्छ। हाम्रो कम्पनीमा आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा उनीहरूको श्रमको उचित संम्मान पनि गरिन्छ।
त्यस्तै, हाम्रो कम्पनीले कामदारको मात्र होइन उनीहरूका परिवारको शिक्षा, स्वस्थ्यमा पनि ध्यान दिन्छ। हामीले समयमा नै र नियमितरूपमा तलब नदिए नयाँ सरकारी नियमअनुसार कम्पनीको खातापातालाई सरकारले रोकिदिन्छ।
त्यसैले पनि आबुधाबीका कम्पनीले आप्रवासी कामदारलाई राम्रो व्यवहार गर्दछन्। यदि कम्पनीले नराम्रो व्यवहार गरे, असमान व्यवहार गरे उसले कानुनीरूपमा उपचार खोज्न सक्छ।
हाम्रो कम्पनीमा त तल्लो स्तरको कर्मचारीले पनि आफनो गुनासा माथिल्लो स्तरसम्म राख्न सक्छ। यदि सम्बन्धित कर्मचारीले गुनासो नसुने उ माथिल्लो तहसम्म गएर कुरा राख्न सक्छ।
यस्तै, यदि कुनै कर्मचारीले कम्पनी छोड्न चाहन्छ भने हामी उसँग एग्जिट इन्टरभ्यू पनि लिन्छौं। नेपाली मेहेनती तथा इमान्दार भएकाले उनीहरूलाई सिक्ने अवसर दिएर वृत्ति विकासको अवसर पनि दिन्छौं। हामीसँग हाल ७२ जना नेपाली सुपरभाइजर छन्। पहिला नन् सुपभाइजर भएका पनि हाल बढुवा भएर सुपरभाइजर भएका हुन्।
मोदीले नेपाल निर्माणमा उच्च अधिकृत नियुक्त गर्ने